Hay’adda Qaramada Midoobay u qaabbilsan Cunnada iyo Beeraha ee FAO oo uga digtay Duufaan kusoo fool leh Soomaaliya – Walaal24 Newss
May 17, 2018	Off	By walaal24
Hay’adda Qaramada Midoobay u qaabbilsan Cunnada iyo Beeraha Adduunka ee FAO ayaa ka digtay Duufaan xooggan oo loogu Magac daray ONE, taas oo kasoo ruqaansatay Waqooyiga Bad weynta Hindiya ayaa kusoo wajahan qaybo ka mid ah Soomaaliya.
Dufaantan ONE ayaa la saadaaliyay in ay saamayn doonto inta badan Gobollada Puntland iyo Somaliand 24 ilaa 48-ka Saac ee foodda inagu soo haya, lagana yaabo inay gaysato wax yeello xooggan.
Duufaanatn oo ay wehliyaan Roobab Lixaad leh ayaa lagu wadaa in ay marka hore ku dhuftaan Puntland 24-ka Saac ee soo socda, iyagoo usii gudbi doona dhanka Somaliland iyo deegaannada ku xeran.
Hay’adda Qaramada Midoobay u qaabbilsan Cunnada iyo Beeraha ee FAO ayaa baaq u dirtay Dadka halkaasi ku dhaqan, iyadoo u soo jedisay inay taxaddar muujiyaan, una diyaar garoobaan halista ka dhalan karta Dabaylahan la saadaalinayo oo aad u xooggan.
Hay’adda ayaa sidoo kale ka digtay inay degaannadaas iyo xitaa meelo kale oo Soomaaliya ka mid ah ay ka dhici karaan daadad, iyadoo ku baaqday ina laga sii taxaddaro dhibaatada ka dhalan karta musiibooyinka la saadaalinayo.
Kalfadhiga kulanka Golaha Wasiirada oo lagu ansixiyay sharciga Duulista iyo Hawada
Ra’iisul Wasaare Khayre oo bixiyay lacag dib loogu dhisaayo Buundada Baardheere
Maamulka Goboleedka Hirshabeelle oo Ciidamadii ugu horeeyay oo tababarka loo soo xiray